ကလေးကို ကလိထိုးသင့်ရဲ့လား............ - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေးကို ချစ်လို့ ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်တဲ့ အသံလေးကို ချစ်လိုက်တာဆိုပြီး ကျီးဖြူကျီးမဲ ဆော့ရင်း ကလိထိုးနေမိလား…….. မေမေဖေဖေတို့ရေ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကလိထိုးတဲ့အခါ ဘေဘီလေး ရယ်တာ ပျော်လို့ရယ်တာလား……. ဘာကြောင့် ရယ်တာလဲ ဆိုတာကို သေသေချာချာသိဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကလိထိုးတဲ့အခါ ဘေဘီလေးက ရယ်တာ ပျော်လို့လား………….
ကလိထိုးတဲ့အခါ ဘေဘီလေး ရယ်တာ ပျော်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလိထိုးလို့ ကသိကအောင့် ဖြစ်နေတာကို ရပ်ပါလို့ ပြောရခက်နေတာကြောင့်ပါ။
ကလိထိုးလို့ ကသိကအောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကလေးက ဘာလို့ မငိုတာလဲလို့ မေးစရာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကလိထိုးတဲ့အခါ ရယ်တာက အလိုလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ တုံ့ပြန်မှု တစ်ရပ်ပါ။ ကလေးကတော့ ကလိထိုး မရပ်သရွေ့ ရယ်နေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကလေးက ရယ်တယ်ဆိုပြီး တောက်လျောက် ကလိထိုး မနေဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ကလိထိုးတာကို အကြာကြီး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ရယ်ရင်း အရမ်း ပင်ပန်းလာတာမျိုးတွေလေ။ ကလေးတွေဆိုရင် လူကြီးတွေထက်တောင် ခံနိုင်ရည် နည်းပါဦးမယ်။ ကလေးက ကြောက်လန့်ရင်း ရယ်ရတဲ့အခါ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ရယ်တာပဲဆိုပြီး ကလိ မထိုးစေချင်ပါဘူး။ ကလိထိုးတဲ့အခါ ကလေး ပျော်လို့ ရယ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ အလိုလျောက် တုံ့ပြန်နေတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
မိဘတွေ သားသမီးကို ဘာကြောင့် ကလိထိုးကြတာလဲ…………
မိဘတွေက ဘေဘီလေးတွေကို ချစ်ကြသလို ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတာက နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုလို့ ယူဆပြီး ကလေးကို ကလိထိုးတာ၊ စနောက်တာတွေကို လုပ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ သားသားမီးမီးတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ဖို့က ကလိထိုးတာ မဟုတ်ဘဲ စာအတူတူ ဖတ်တာ၊ အတူတူ ဈေးဝယ်ထွက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း အတူတူလုပ်တာ၊ အတူတူ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်။
သီချင်းအတူတူဖွင့်ပြီး အတူတူလိုက်ဆိုတာ ကခုန်တာကလည်း မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ကလိထိုးမယ့်အစား ကလေးနဲ့ တူဝါးဆော့တာ၊ What time is it Mr. Wolf လိုမျိုး ကစားနည်းတွေ ဆော့ပေးလို့ရပါတယ်။
ကလိထိုးတာကြောင့် ဘေဘီလေးမှာ ဘာထိခိုက်နိုင်လို့လဲ
ဘေဘီလေးနဲ့ မိဘကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တိုးချင်တယ်ဆိုရင် ကလိမထိုးဘဲ ချစ်တယ်ဆိုတာကို နှုတ်ကနေပဲ ပြောလိုက်ပါ။ ကလေးကို ခါးနားကို ကလိထိုးတာ၊ ချိုင်းကြားကိုကလိထိုးတာ၊ ခြေဖဝါးကို ကလိထိုးတာတွေက အသေးစား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုပါလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နာကျင်မှုကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်
လူတွေကို ယုံကြည်မှုနည်းသွား စေနိုင်ပါတယ်
ရုတ်ရက် အသက်ရှူရပ်သွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ရယ်ရင်း တက်သွားတာမျိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အရှိန်ယူနေတဲ့ ဘေဘီလေးကို ကိုယ့်လက်နဲ့မနှိပ်စက်မိစေဖို့ ကလိမထိုးကြဖို့ ပြောပါရစေ။ ကလိထိုးတာက ကလေးကို ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်ဘဲ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်။